Liraglutide: zava-mahadomelina tsara amin'ny fikarakarana ny diabeta Mellitus Type 2 Ary ny hatavezana
2. Liraglutide rafitry
3. Famantarana Liraglutide
4. Liraglutide fomba fiasa
5. Ny Dosage sy ny Administration Administration ny Liraglutide
6. Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny Liraglutide?
7. Tokony hokarakarainao ny fiantraikany manaraka / mampitandrina rehefa mampiasa Liraglutide
8. Fifandraisan'ny Liraglutide
9. Traikefa klinika
Liraglutide (204656-20-2) dia fanafody amidy amin'ny marika isan-karazany amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, izay ampiasaina amin'ny tanjona fitsaboana isan-karazany. Ny marika marika Liraglutide mahazatra indrindra eny an-tsena ankehitriny dia Victoza sy Saxenda. Ny Liraglutide dia mampiasa miankina amin'ny marika novidinao, ohatra, ny Victoza dia ampiasaina amin'ny fampihetseham-batana sy ny sakafo ara-dalàna mba hampitomboana ny fifehezana siramamy ao anaty olon-dehibe sy diabeta mellitus karazana 2 amin'ny ankizy farafahakeliny folo taona. Ho fanampin'izany, Victoza koa dia nanaporofo fa zava-dehibe amin'ny fampihenana ny loza ateraky ny aretim-po toy ny tapaka lalan-dra na aretim-po amin'ireo olon-dehibe manana aretim-po sy diabeta karazana 2.
Etsy ankilany, Saxenda, izay koa ny marika Liraglutide hafa, ampiasaina amin'ny sakafo sy fanatanjahan-tena mety hanampiana ny mpampiasa hampihena lanja rehefa mijaly amin'ny fepetra ara-pahasalamana isan-karazany. Na dia anarana marika Liraglutide aza i Saxenda dia tsy ampiasaina ho an'ny fitsaboana 1 na karazana diabeta roa, ary tsy famenon-tsakafo fanatanjahan-tena koa. Ny dokotera koa dia afaka manoro hevitra Mampiasa Liraglutide noho ny antony hafa tsy tafiditra ato amin'ity torolàlana ity. Na izany aza, dia tokony ho alaina foana ny fahazoana Liraglutide tsara amin'ny dokotera amin'ny vokatra tsara kokoa.
Liraglutide amidy dia misy amin'ny fivarotana an-tserasera sy fivarotam-panafody isan-karazany, saingy tokony hitandrina foana ianao ny amin'ny loharano niavian'izany. Manaova fikarohana sahaza hatrany mba hahazoana antoka fa mahazo ny zava-mahadomelina anao amin'ny mpivarotra azo antoka sy efa za-draharaha. Ny kalitaon'ny fanafody izay raisinao dia misy fiatraikany amin'ny valiny ho hitanao amin'ny faran'ny tsingerin'ny dosie. Ny vidin'ny Liraglutide dia mety miovaova arakaraka ny loharano iray mankany amin'ny iray hafa fa alao antoka fa hahazo ny kalitao tsara indrindra ianao. Raha tsy azonao antoka ny momba ilay loharano, manatona ny dokotera anao.
zavatra simika, Liraglutide rafitry dia natao amina peptide toy ny peptide asidra lava-be miketrika izay tantanina miaraka amin'ny hetsika antihyperglycemic. Ny hetsika maharitra mandritra ilay fanafody dia vokatry ny asidra matavy, ary ny fifamatorana asidra palmitika amin'ny GLP-1, izay mamatotra mora miaraka amin'ny albumin. Ny fatoran'ny albumin dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny Liraglutide amin'ny fanimbana avy hatrany raha vao mandray ny fatrao ianao, ary vokatr'izany, dia mitarika ny famoahana tsy tapaka sy miadana an'ny GLP-1. Izany dia miantoka fa hahazo ny vokatra tadiavina ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Nankatoavin'ny FDA i Victoza sy i Saxenda amin'ny fitsaboana ny aretina isan-karazany any Etazonia. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, nekena i Victoza amin'ny fitsaboana aretim-po sy diabeta type 2. Fantatra ihany koa amin'ny fampihenana ny soritr'aretin'ny gastrointestinal toy ny mandoa, maloiloy ary mivalana. Ny Saxenda dia nankatoavin'ny FDA ihany koa mba hanampy amin'ny fitsaboana ny hatavezina sy ny fifehezana ny lanjan'ny vatana. Ny liraglutide dia tokony horaisina rehefa te hampihena ny aretim-po vokatry ny aretim-po na diabeta mellitus karazana 2 ianao. Ary raha te-hifehy ny lanjan'ny vatanao vokatry ny diabeta karazana 2 ianao dia ho zava-mahadomelina tena tsara ho anao ny hatavezin'ny Liraglutide. Liraglutide hatavezana dia nanampy ny mpampiasa maro hitantana ny lanjany koa. Na dia mahatsapa ny soritr'aretina azo tsaboina amin'ny vovoka Liraglutide ianao, dia aza mihinana fanafody raha tsy manatona mpitsabo matihanina. Na izany aza, tadidio fa ny dokoteranao dia afaka manome fanafody an'io fanafody io ho anao ihany koa amin'ny fanampiana amin'ny fitsaboana aretina hafa rehetra izay tsy voatanisa amin'ity lahatsoratra ity.
Amin'ny tranga maro, ny Liraglutide dia miasa miankina amin'ny zavatra tianao ho tratrarina amin'ny faran'ny tsingerin'ny dosie. Ohatra, ny fomba fiasa Liraglutide ho an'ireo olona mihinana fatra liraglutide ho an'ny fihenan-danja dia tsy mitovy amin'ireo mpampiasa mandray azy io amin'ny fitsaboana diabeta mellitus karazana 2. Ireo marika marika Liraglutide roa Victoza sy Saxenda miasa tsy mitovy raha vao miditra ao amin'ny rafitra vatanao.
Ohatra, ny hatavezivezy Liraglutide (Saxenda) dia miasa amin'ny fanakanana ny famokarana hormonina mihinana (glucagon-like-peptide na GLP-1) ao amin'ny vatanao, izay mifehy ny hanoanana. Raha vantany vao milatsaka ny famokarana GLP-1, dia hidina ny filanao ary hiafara amin'ny fihinana kaloria kely kokoa, ary amin'ny farany, very ny lanjan'ny vatanao. Tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny lanjan'ny vatanao ny kaloria, ary raha azonao fehezina dia mora aminao ny mandatsaka kilao vitsivitsy.
Etsy ankilany, Victoza dia miasa amin'ny fomba telo samihafa hanatanterahana ny valiny nampanantenain'ny mpamokatra zava-mahadomelina. Voalohany, miasa i Victoza amin'ny alàlan'ny fampihenana ireo sakafo mamela ny vavoninao, izay mifehy ny haavon'ny siramamy ao amin'ny vatanao. Na dia mitovy aza ny mekanisma, ny fanafody koa dia manakana ny aty tsy hamokatra siramamy be loatra. Farany, ny Liraglutide, izay singa lehibe ao amin'ny Victoza, dia mandrisika ny sarakaty hamokarana insuline bebe kokoa raha avo ny siramamy ao anaty. Ny zava-mahadomelina dia manatsara ireo hetsika rehetra ireo amin'ny fanamafisana ny fahombiazan'ny sela beta. Ny sela dia manampy amin'ny fifehezana ny siramamy amin'ny alàlan'ny famoahana insuline, izay mampihena ny haavon'ny siramamy ao amin'ny rafitry ny vatanao. Ny fanentanana ny famokarana insuline amin'ny vatanao no antony voalohany mahatonga ny Victoza ampiasaina amin'ny fitsaboana ny nitendry 2 diabeta diabeta.
Mampiasa Liraglutide miovaova amin'ny mpampiasa iray mankany amin'ny iray hafa miankina amin'ny toe-pahasalamana ara-pahasalamana. Ny fatran'ny zava-mahadomelina dia tokony hapetraky ny matihanina amin'ny mpitsabo arakaraka ny toe-pahasalamana. Ny ankizy latsaky ny folo taona dia tsy voalaza fa hitondra an'io zava-mahadomelina io, satria mety hamoaka azy ireo amin'ny voka-dratsy ratsy. Ny vatan'olombelona dia tsy mitovy, ary izany indrindra no tokony hanoroana fizahana ara-pitsaboana alohan'ny hanombohana maka fanafody. Na dia miaraka amin'ny toromarika dosie natolotry ny mpanamboatra aza i Liraglutide, mety tsy ho anao io indraindray. Ny dokotera irery no olona mety hametraka fatra Liraglutide havanana ho anao rehefa avy nandinika ny toe-pahasalamanao ianao.
Ny tsindrona Liraglutide
Liraglutide dia fanafody azo tsindrona izay tokony hapetraka amin'ny sandrinao ambony, ny kibonao, na ny fenao. Tsy misy fotoana voatondro manokana handraisanao ny fatranao Liraglutide, fa azonao atao ny mandray azy na tsy misakafo ianao. Azonao atao ny manodina ny tranokala liraglutide fampidirana foana mba hampihenana ny voka-dratsy na fanaintainana izay mety hiainanao ao amin'ilay faritra. Ny fotoana fitantanan-dosiana dia azo ovaina tsara nefa tsy manitsy ny fatra napetraka. Tsara ny manara-maso hatrany ny tsirairay Ny tsindrona Liraglutide hita maso; Tokony hoentinao ny tsindrona raha tsy misy loko ny vahaolana ary tsy misy singa hita maso. Raha toa ka miteraka loko tsy mahazatra ny vahaolana, aza maka izany raha tsy manontany amin'ny dokotera anao.
Ny fatran'ny vovoka Liraglutide dia miankina amin'ny fandeferanao amin'ny vatanao, amin'ny taonanao ary amin'ny fahasalamanao.
Ny karazana diabeta 2
ny voalohany Fatran'ny Liraglutide (204656-20-2) fatra ho an'ny olon-dehibe dia 0.6mg, izay tokony hakana indray mandeha isan'andro mandritra ny herinandro. Aorian'ny herinandro iray, ny fatra dia azo ampifanarahana amin'ny 1.2mg subcutaneously indray mandeha isan'andro, ary raha tsy mahafehy ny fahazoana an'io aretina io ianao dia afaka mampitombo bebe kokoa ny fatra amin'ny 1.8mg isan'andro ny dokotera. Ny diny fikojakojana Liraglutide dia tokony eo anelanelan'ny 1.2 sy 1.8 mg isan'andro. Saingy, ny fatra ambony indrindra dia 1.8mg isan'andro.
Ny fatra voalohany 0.6mg isan'andro dia natao hampihenana ny soritr'aretin'ny gastrointestinal vokatry ny fidirana amin'ny fitsaboana ary tsy ho ampy amin'ny fifehezana glycemika. Na izany aza, ny Liraglutide dia tsy soloina insuline ary ny marary voan'ny diabeta mellitus karazana 1 na ketoacidosis diabeta dia tsy tokony handray izany. Rehefa manomboka an'io fitsaboana io ianao dia diniho ny fampihenana ny sekolin'ny insuline mba hampihena ny risika hypoglycemia.
Mihena ny loza mety hitranga amin'ny Cardiovascular
Ny fatra voalohany an'ny Liraglutide ho an'ny olon-dehibe izay manana olana aretim-po dia 0.6mg isan'andro ary tokony halaina amin'ny herinandro voalohany. Ny fatra dia tokony hampitomboina amin'ny 1.2mg isan'andro amin'ny herinandro ho avy, ary raha tsy tratranao ny fifehezana glycemie dia tokony hampitombo ny dosage bebe kokoa hatrany amin'ny 1.8mg isan'andro. Na izany aza, amin'ny fotoana Liraglutide vovoka nitombo ny habetsaky ny fatrany, ho tratranao ny valiny tianao. Ny fatra amin'ny fikojakojana dia tokony ho eo anelanelan'ny 1.2mg sy 1.8mg isan'andro, raha toa kosa ny fatra 1.8mg ambony indrindra amin'ny fatra lehibe indrindra isan'andro.
Liraglutide doka ho an'ny lanjan'ny fihenan'ny lanjany na ny obesity
The famonosana liraglutide ny fisondrotan'ny fatra dia tokony harahina, mba hampihenana ny mety hiaina soritr'aretin'ny gastrointestinal. Ny fanitsiana fatra dia azo ahemotra mandritra ny herinandro fanampiny mba hahitana vokatra tsara kokoa. Na izany aza, ny dokoteranao dia tokony hitarika anao amin'ity dingana ity. Ny fatra voalohany eto dia 0.6, izay tokony horaisina subcutaneous indray mandeha isan'andro. Amin'ny herinandro faharoa, ny doka dia azo nitombo hatramin'ny 1.2mg isan'andro; amin'ny herinandro fahatelo, ny fatra dia azo atsangana bebe kokoa hatramin'ny 1.8 isan'andro. Amin'ny herinandro fahefatra, ny dosie dia tokony hampitomboina amin'ny 2.4mg ary ny herinandro fahadimy ho 3mg indray mandeha isan'andro. Na izany aza, ny dokoteranao dia hitarika anao amin'ny fotoana sy ny fanatsarana ny doka.
Ny fatra fikojakojana eto dia 3mg indray mandeha isan'andro, fa raha tsy zakan'ny vatanao izany dia afaka manoro hevitra anao ny dokotera hampiato ny fatrany. Ny fitantanana lanja mavesatra maharitra amin'ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io dia tratra tamin'ny fatra avo lenta. Amin'ny matavy loatra, ny marika Saxenda Liraglutide dia voaporofo fa tena ilaina amin'ny fitantanana lanja, ary ny fanafody dia tsy ampiasaina amin'ny fitsaboana diabetes mellitus karazana 2. Na izany aza, fantatra amin'ny fitsaboana ny karazana diabeta mellitus 2 sy aretim-po kardia i Victoza.
Dosisina ny zaza
Ny fatra fanindronana liraglutide dia tsy tokony ho an'ny zaza latsaky ny folo taona no ho miakatra. Ny zaza ambany noho io dia tsy tokony homena ity fanafody ity na dia mampiseho soritr'aretina azo tsaboina amin'ny peptide aza izy ireo. Ny fatran'ny liraglutide amin'ny zaza dia miankina amin'ny toe-pahasalamana tsaboina ihany koa. Ireto ny dosie atolotra anao;
Dosis pediatric ho an'ny karazana diabeta 2
Ny fatra fanindronana voalohany an'ny Liraglutide dia 0.6mg, izay tokony horaisina indray mandeha isan'andro mandritra ny herinandro farafahakeliny. Aorian'izany dia azo ampitomboina hatramin'ny 1.2mg isan'andro ny fatra, ary raha tsy tratra ny fifehezana glycemika dia afaka mampiakatra ny doka hatrany amin'ny 1.8 gm ny fanafody amin'ny herinandro manaraka. Ny fatran'ny zaza matavy indrindra amin'ny diabeta karazany roa dia 1.8mg isan'andro, raha toa ka 0.6mg ka hatramin'ny 1.8mg isan'andro ny doka fikojakojana.
Ny liraglutide dia azo omena azy ireo ihany koa amin'ny ankizy hanampy amin'ny fitsaboana amin'ny toe-pahasalamana samihafa toy ny olan'ny renal sy ny aty. Na izany aza, rehefa mitsabo ireo fepetra roa ireo ianao dia tokony handray tsara an'i Liglutide satria mety hitarika fiantraikany ratsy izany rehefa tafahoatra. Tsy misy fanitsiana fatra naoty rehefa maka peptide liraglutide ho an'ny olan'ny atiny na renal. Rehefa maka dosage liraglutide, mampihena ny fihenan-tsiran'ny insuline mba hampihena ny mety hisian'ny hypoglycemia.
Inona no mitranga raha ovay aho?
Ny famoahana zava-mahadomelina dia tsy hevitra tsara ary tsy tokony hamporisihana na dia rehefa maka aina aza Liraglutide fatiantoka hihena na fikarakarana ny toe-pahasalamana hafa. Manoro hevitra anao ny hifikitra hatrany amin'ny torolàlana omen'ny dokotera anao. Ny fihoaram-pefy dia hitarika fiantraikany ratsy, izay mety hanaratsy ny toe-pahasalamanao na hiteraka fahasarotana hafa aza. Na izany aza, indraindray, ny fihoaram-pefy dia mety vokatry ny lozam-pifamoivoizana na ny fihetsiky ny vatanao amin'ny zava-mahadomelina. Ny voka-dratsin'ny overdosing mahazatra indrindra dia ahitana ny vava sy ny mandoa. Rehefa tsikaritrareo fa efa nanao dosage mihoatra noho ny fangatahana ianao, dia mitadiava mpitsabo haingana araka izay tratranao. Afaka manantona mpitsabo anao amin'ny fanampiana anao koa ianao.
Nandritra ny taona maro izay dia nanaporofo voka-tsoa hafa i Liraglutide, indrindra teo amin'ny tontolo ara-pitsaboana. Na izany aza, afaka miaina ambony indrindra ianao tombony liraglutide, raha mifikitra amin'ny torolàlana fatra amin'ny sakafo sy ny sakafo mety na fanatanjahan-tena araka ny torolain'ny dokotera ianao. Ireto ny sasany amin'ireo tombontsoa malaza Liraglutide.
Manatsara ny diabeta Type 2
Ny marika marika Liraglutide Victoza dia nampiasaina ary nankatoavin'ny FDA ho an'ny fitsaboana diabeta karazana 2. Ny fanafody dia manampy amin'ny fifehezana ny siramamy ao amin'ny vatanao. Rehefa avo ny vatanao amin'ny siramamy, ny liraglutide dia mandrisika ny sarakatyo hamokatra anzima insuline bebe kokoa izay manampy amin'ny fanalefahana ny glucose amin'ny ra.
Manampy amin'ny ady amin'ny Obesity sy ny lanjan'ny vatana
Tany Etazonia, nankatoavin'ny FDA ny Liraglutide ho an'ny fitsaboana matavy loatra taorian'ny nanaporofoana fa mahomby amin'ny famoretana ny fahazotoan-komana sy ny fihinanana kaloria izay nanampy tamin'ny fitantanana lanja ny vatana. Amin'ny salan'isa, ny vehivavy dia niaina fihenan-danja lehibe rehefa nidina ny lanja liraglutide noho ny lehilahy. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy handray soa amin'ity zava-mahadomelina ity ny lehilahy. Ho an'ny traikefa mampihena ny lanjany tsara kokoa amin'ity zava-mahadomelina ity, ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena mety dia tokony miaraka amin'ny fatra.
Miaro ny rafitra Vascular
Ny liraglutide dia noporofoina fa ilaina amin'ny fiarovana ny hozatrao ary mampihena ny loza ateraky ny aretim-po. Ny fandalinana ara-pitsaboana koa dia mampiseho fa ny maka làlaglutide, ny aretim-po mihatsara dia vokatry ny karazana diabeta mivazy 2 ary ny hatavezana. Ny fanafody koa dia manampy amin'ny fifandanjana amin'ny tosidranao, izay manampy amin'ny fanamafisana ny fahasalamanao.
Ity zava-mahadomelina ity dia voalaza ihany koa fa misy fiatraikany tsara amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny ati-dohanao, fanampiana amin'ny fifehezana ny fitaintainanana, ary mety ho toy ny fanafody anti-oxidant sy anti-inflammatoire. Tamin'ny fanadihadiana ara-pitsaboana iray hafa, liraglutide dia naneho fa afaka manampy ny olona amin'ny fiankinan-doha amin'ny alikaola izy io. Na izany aza, ny overdose liraglutide dia mety hampiharihary anao amin'ny fahasarotana ara-pahasalamana ary hanimba ny tombo-tsoa andrasana rehetra.
Saika ny zava-mahadomelina rehetra, raha ampiasaina amin'ny fomba ratsy na diso tafahoatra dia mety hampiharihary anao amin'ny voka-dratsy, ary ny liraglutide dia miavaka. Na izany aza, indraindray ny voka-dratsiny dia mety ho valin'ny fomba fandraisan'ny vatanao ny fatran'ny lanjan'ny liraglutide. Ny sasany fampitandremana liraglutide dia mahazatra ary nanjavona miaraka amin'ny fotoana, fa raha tsy izany dia tsy hanjavona intsony ny vokatr'ireto farany na lasa mafy loatra, dia mitadiava fitsaboana;
Orona mihazakazaka, mikohaka na mihetsiketsika
Famonoana na fahasarotana amin'ny fihodinana
Aretin-dra sy fanaintainana fo
Misy fampitandremana mafy liraglutide izay mitaky fikarakarana ara-pitsaboana eo noho eo raha vao manomboka miaina izany ianao, ary ao anatin'izany;
Hoditra mavo na maso
Raha manomboka mieritreritra ny famonoana ianao, manimba ny tenanao na ny hafa
Fantatra, mivonto tenda, lela, tarehy, maso na vava.
Sarotra amin'ny mitelina na moka.
Ho an'ireo matotra ireo Liraglutide effects, omena torohevitra ianao mba hitsahatra amin'ny fandraisana dosie avy hatrany rehefa mitady fanampiana ara-pahasalamana ianao.
Ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fiasan'ny fanafody anao na mety hampidi-doza anao amin'ny fiatraikany mahery vaika. Noho izany, alohan'ny hanombohanao ny fatran'ny Liraglutide, dia ilaina ny mampahafantatra ny dokotera anao momba ny toe-pahasalamanao hafa izay voan'ny fitsaboana ianao. Ny fanafody sasany dia tsy afaka miara-miasa, ary tsara ny mahafantatra ny dokoteranao momba ny fanafody hafa azonao raisina. Momba ny lafiny azo antoka, aza manomboka, manova ny fatrany na ajanony ny fanafody tsy misy torohevitra amin'ny matihanina mpitsabo.
Manoro hevitra anao ny tsy hisotro an'io zava-mahadomelina io miaraka amin'ny fanafody hafa misy ny Liraglutide satria mety hitarika fihoaram-pefy sy hamoizany anao amin'ny voka-dratsy lehibe. Miankina amin'ny toe-pahasalamanao, ny dokotera no hanome anao ny mety Fifandraisan'ny Liraglutide hanatsarana ny valiny. Maro ny zava-mahadomelina azonao raisina miaraka amin'ny Liraglutide toy ny acetohexamide, albuterol, cinoxacin ary danazol, miaraka amin'ny maro hafa.
Araka ny liraglutide reviews amin'ny sehatra an-tserasera isan-karazany, mpampiasa maro no afa-po amin'ny valiny sy ny tombontsoa azon'izy ireo nandritra na rehefa avy nihinana zava-mahadomelina. Ny fandalinana ara-pitsaboana dia mampiseho ihany koa ny antony nanampian'ny zava-mahadomelina amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany toy ny hatavezina, diabeta karazana 2, olana amin'ny voa ary amin'ny fisorohana aretim-po vokatry ny toe-pahasalamana samihafa. Ny fifandraisana liraglutide koa dia voaporofo fa matanjaka amin'ny fitsaboana diabeta karazana 2 amin'ny ankizy folo taona farafahakeliny.
Na izany aza, mpampiasa sasany dia nanana traikefa ratsy tamin'ity zava-mahadomelina ity, saingy izany dia azo lazaina ho fihoaram-pefy Liraglutide na fandeferana amin'ny vatana. Ny vaovao tsara dia ny fiovan'ny voka-dratsin'ny liraglutide raha mifanerasera amin'ny dokoteranao amin'ny fotoana mety ianao. Ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny fiatraikany mafy rehefa mihinana an'io fanafody io dia mandeha amin'ny fizahana ara-pahasalamana alohan'ny hanombohanao ny fatra anao ary avelanao ny mpitsabo hametraka fatra mety aminao. Soso-kevitra ihany koa ny fanarahana ny torolàlana momba ny fatra ary ampahafantaro amin'ny dokoteranao ny zava-mahadomelina hafa mety ho raisinao.
Io zava-mahadomelina io dia voaporofo fa tena ilaina amin'ny tontolo ara-pitsaboana bebe kokoa noho izany amin'ny fikarakarana ny hatavezana, karazana diabeta 2 ary olana amin'ny fo, hafa. Liraglutide vovoka (204656-20-2) amidy dia misy amin'ny fivarotana an-tserasera isan-karazany, fa ho hitanao amin'ny anarana marika isan-karazany toa an'i Saxenda sy Victoza. Na izany aza, alao antoka fa azonao tsara izay ampiasaina amin'ny marika tsirairay alohan'ny hanaovana ny baiko. Araka ny voalaza etsy ambony, ny marika marika liraglutide tsirairay dia ampiasaina amin'ny tanjona manokana. Nankatoavina i Saxenda amin'ny fihenan'ny lanja sy ny fitsaboana ny hatavezina raha toa kosa i Victoza dia ampiasaina amin'ny fitsaboana diabeta karazana 2 ary koa aretim-po vokatry ny fatran'ny siramamy ao amin'ny ra avo. Na izany aza, araho ny torolàlana momba ny fika tsy hiaina ny voka-dratsin'ny Liraglutide.
Tsara kokoa ny hanao fikarohana mety momba anao mividy liraglutide loharano alohan'ny hanaovana ny fividiananao. Androany dia betsaka ny mpivarotra peptide eny an-tsena, ka manasarotra anao ny hahafantatra hoe aiza no ahazoana fanafody manara-penitra izay hanome antoka anao valiny mahavariana. Jereo ny tsikera liraglutide ao amin'ny tranonkalan'ny mpivarotra hahazoana topimaso momba ny vokatra sy ny fomba fiasan'ny mpivarotra. Ny fisafidianana ny mpamatsy fividianana liraglutide za-draharaha indrindra dia hanome toky anao ny serivisy kalitao ary koa ny vokatra fitsaboana tsara. Ny vidin'ny Liraglutide dia miovaova amin'ny mpivarotra tsirairay.
Tsy mila miahiahy momba na inona na inona ianao rehefa maka Liraglutide satria fanafody ara-dalàna izany ary hahazoana vokatra tsara kokoa, ampidiro ny fanafody anao amin'ny tsingerin'ny dosage iray.
Kaakeh, Y., Kanjee, S., Boone, K., & Sutton, J. (2012). Liraglutide - naratra voa mafy nateraky ny voa. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Therapy fitsaboana, 32(1), e7-e11.
Marso, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, JF, Nauck, MA,… & Steinberg, WM (2016). Ny valin'ny liraglutide sy ny aretim-po amin'ny diabeta karazana 2. New England Journal of Medicine, 375(4), 311-322.
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015). Liraglutide amin'ny olona voatsabo amin'ny diabeta karazany 2 miaraka amin'ny tsindrona insuline isan'andro: fitsapana ara-pitsaboana tsy tapaka (fitsarana MDI Liraglutide). Bmj, 351, h5364.
Davies, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skjøth, TV,… & DeFronzo, RA (2015). Ny fahombiazan'ny liraglutide ho an'ny fihenan'ny lanjan'ny marary diabeta karazana 2: ny fitsapana diabeta SCALE. Jama, 314(7), 687-699.